Diyaarad ay leedahay shirkada Fly Emirates oo ku burburtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Dubai - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDiyaarad ay leedahay shirkada Fly Emirates oo ku burburtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Dubai
Diyaarad Fly Emirates. Sawirka: Alarabiya TV.
Dubai-(Puntland Mirror) Diyaarad ay leedahay shirkada Fly Emirates ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai maanta oo Arbaco ah, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada Isutaga Imaaraatka Carabta.
Rakaabkii saarnaa diyaarada ayaa la badbaadshay dhamaantood, mana jirto wax kahasaare ah oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada Imaaraatka.
Diyaarada oo nooceedu ahaa Boeing 777 ayaa la sheegay in ay ka timid magaalada Trivandrum ee dalka Hindiya ayna u socotay magaalada Dubai.
August 3, 2016 Fly Emirates plane crash at Dubai international airport, passengers evacuated
October 2, 2016 Kenya oo kordhisay wakhtiga cafiska guud ee ay u fidisay dhalinyarada Al-Shabaab ku biiray
Garoowe-(Puntland Mirror) 41 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Buuraha Caalmadow, Ciidamada Amaanka Puntland ayaa bayaan ku sheegay maanta oo Sabti ah. “Ciidamada Amaanka Puntland [...]